Alahady – 29/06/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady – 29/06/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 12, 1 -11 )
Fantatro ankehitriny fa nanafaka ahy tamin’ny tanan’i Herôda ny Tompo
Tamin’izany andro izany, dia nasain’i Herôda mpanjaka nosamborina mba hampahoriana ny sasany anisan’ny Eglizy. Nasainy novonoina tamin’ny sabatra i Jakôba rahalahin’i Joany. Nony hitany fa nankasitrahan’ny Jody izany, dia nasainy nosamborina koa i Piera. Andron’ny azima tamin’izay. Nony efa nosamborina izy, dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy nambenan’ andia-miaramila efatra, misy miaramila efatra avy; fa rahefa afaka ny Paka vao kasainy hatolotra ny vahoaka izy. Raha mbola notanana tao an-tranomaizina i Piera, dia tsy tapaka ny fivavahana nataon’ny Eglizy ho azy.
Tamin’ny alin’ny hamoahan’i Herôda azy, raha natory teo anelanelan’ny miaramila roa lahy i Piera, sady nifatotra tamin’ny rojo vy roa, ary nisy mpiambina niambina teo am-baravaran’ny tranomaizina, dia indro nisy Anjelin’ny Tompo sy fahazavana namirapiratra tonga tampoka tao an-tranomaizina; nanohina ny tehezan’i Piera ilay Anjely, namoha azy nanao hoe: “Mitsangàna faingana”; dia niala tamin’ny tanany ny rojo vy. Ary hoy ilay Anjely taminy: “Ataovy ny fehin-kibonao, ary fehezo ny kapanao”. Dia nataony izany, ka hoy indray ny Anjely: “Tafio ny lambanao, ary manaraha ahy”. Dia nivoaka i Piera ka nanaraka azy; tsy fantany ho tena zavatra anefa no nataon’ny Anjely, fa nataony ho fahitana fotsiny izany. Nony efa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga tao amin’ny vavahady vy, fidirana ao an-tanàna; nivoha ho azy io, ka tafavoaka izy ireo, dia nizotra tamin’ny làlana iray, vao nilaozan’ilay Anjely tampoka izy. Izay vao nahatsiaro fanahy i Piera, ka nanao hoe: “Fantatro ankehitriny fa efa naniraka ny Anjeliny tokoa ny Tompo, ka nanafaka ahy tamin’ny tànan’i Herôda, sy ny fanampoizan’ny vahoaka Jody”.
Vakiteny faharoa: Taratasy faharoan’i Md Paoly Apôstôly ho an’i Timôte (2Tim 4, 6-8. 17-18)
Hany sisa hataoko dia ny mandray ny satroboninahitry ny fahamarinana..
Ry zanako malala, izaho dia mova tsy ny efa haidina ho fanatitra sahady, ary efa antomotra ny andro hialako. Niady ny ady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho; hany sisa hataoko dia ny mandray ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo Mpitsara marina ahy amin’izany andro izany, ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’izay rehetra tia ny hahatongavany koa. Nilaozan’ny olona aho, nefa tonga namonjy ahy ny Tompo, sy nankahery fo ahy, mba hanatontosako ny fitorianteny, sy handrenesan’ny Jentily rehetra azy, sady nesorina teo am-bavan’ny liona aho. Hanafaka ahy amin’ny asan’ny ratsy rehetra ny Tompo, ary hamonjy ahy ho amin’ny fanjakany any an-danitra. Ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Evanjely masina nosoratan’i Md Matio (Mt 16, 13-19)
Ianao no Piera, ary homeko anao ny fanalahidin’ny fanjakan’ny lanitra
Tamin’izany andro izany, raha tonga tany amin’ny faritany atao hoe: Sezarean’i Filipo Jesoa, dia nanontany ny mpianany hoe: “Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona?” Ary hoy ireo: “Ny sasany manao hoe i Joany Batista, ny sasany i Elia, ary ny sasany i Jeremia, na ny anankiray amin’ny Mpaminany. Dia hoy i Jesoa taminy: “Fa ianareo kosa, ataonareo ho iza Aho?” Namaly i Simôna Piera ka nanao hoe: “Ianao no Kristy Zanak’Andriamanitra velona”. Dia namaly i Jesoa ka nanao taminy hoe: “Sambatra ianao, ry Simôna zanak’i Joany, fa tsy ny nofo aman-dra no nanambara izany taminao, fa ny Raiko izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao fa ianao no Piera (vatolampy), ary eo ambonin’izany vatolampy izany no hanorenako ny Egliziko, ary ny vavahadin’ny afobe tsy haharesy azy. Homeko anao ny fanalahidin’ny fanjakan’ny lanitra, ka izay rehetra hofehezinao ety an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra hovahanao ety an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra”.
Toriteny Alahady faha 27 May 2018
Alahady fahafito Paka – 01/06/2014 – Toriteny